China 3M Deluxe Pro Angler Kayak mveliso kunye nabenzi | uOceanus
Product Inkcazo: 3M Deluxe Pro Angler Kayak ukukukhanya ubunzima kunye lula ukwenza. Le Kayak igcina indawo efakela electric motor .Seat ndawo uyakwazi ukubeka ibhetri ukugcina eninzi isithuba zohambo. Indawo Standard: 1 * Deluxe Aluminium ...
Ubunzima Net: 23kgs
Khulisa Ubunzima: 25kgs
20'ft Container Capacity: 40pcs yale Kayak
40'HQ Container Capacity: 100pcs yale Kayak
3M Deluxe Pro Angler Kayak ukukukhanya ubunzima kunye lula ukwenza. Le Kayak igcina indawo efakela electric motor .Seat ndawo uyakwazi ukubeka ibhetri ukugcina eninzi isithuba zohambo.
3 * intonga umnini-Multi
5 * Big ukukhuhla phambi
1 * Life intambo
6 * Black Scupper Imigudu
2 * ethwele isingatha
1 * motor zombane umnini ndawo
Payment: A): 30% deposit T / T kwangaphambili,-70% eseleyo nxamnye BL ikopi;
Lwenkonzo: ngokuyidadisa elwandle izibuko elikufutshane loMthengi, ixesha elithile kuxhomekeke ncakasana.
Q: amaxabiso zethu zixhomekeke ukutshintsha ngokuxhomekeke imo kanye kayaks kunye nobungakanani. Siya kuthumela kuwe uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva yabafowunelwa bakho nathi ukuba ufuna ingcaciso engaphezulu.
Q: Ewe, ngokuqhelekileyo, MOQ wethu yenye 20'ft ngokupheleleyo okanye 40'HQ isikhongozeli. Kakade ke, ukuba ufuna enye okanye ngaphezulu, kwamkelekile ukuba kuthi. Ukuze ukwazi iinkcukacha ezithe vetshe, nceda uqhagamshelane nathi.
Kakade ke, xelela nje kum iintlobo Kayak kunye nobungakanani oyifunayo, yaye siza kukunceda ubone inani lokugqibela ngokusebenzisa ukubala.
Ewe, sinako uprinte LOGO yakho igobhogobho le kayaks.
Q: imibala abangatshatanga kunye nomxube imibala kwenziwe.
Umqulu Iinkcukacha: Enye inwebu bubble ingxowa, imitha enye ikhadibhodi elide emazantsi, kunye ingxowa umaleko zeplastiki omnye. Kakade ke, sinako kwakhona apakishe kayaks ngokwemfuneko yakho.
Q: ixesha Lead: iintsuku 1-2 ngokuba umyalelo isampula, 7-10days nganye 20'ft isingxobo, kunye 10-15days 40 'HQ ngomgqomo ngamnye emva kokuba idiphozithi.
Njani ukuqinisekisa umgangatho imveliso leyo?
Inkqubo yethu yokuvelisa sele uthotho uluhlu olungqinisisa eziqinisekisa kayaks zethu ukuhlangabezana imigangatho yethu esemgangathweni. Test Amanzi kufuneka yenziwe phambi kokuba wasonga.
Kayak Double Fishing
Ukuloba Kayak elinezihlalo Aluminium
Ukuloba Pedal Single Kayak
Hlala Top Kayak Fishing Kayak Single